Semalt: के लागी सबै भन्दा राम्रो एसईओ उपकरण 2021 मा निवेश योग्य छ?
प्रतिस्पर्धी विश्लेषण एक विजेता मार्केटिंग रणनीति तयार गर्न को एक प्रमुख तत्व हो। सन्तोषजनक नतीजाहरू प्राप्त गर्न, कुनै पनि एसईओ एजेन्सी वा स्वतन्त्र एसईओ प्रदायकले उनीहरूको ग्राहकको ईन्डस्ट्रीमा कस्ता प्रचलनहरू प्रचलित छन् भनेर थाहा पाउनुपर्दछ। थप रूपमा, उनीहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूले ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न के गतिविधिहरू गरिरहेका छन् भनेर जान्नु आवश्यक छ। गहन प्रतिस्पर्धी विश्लेषणले तपाईंलाई बजारमा हुने परिवर्तनहरूको पूर्वानुमान गर्न र प्रवृत्तिहरू र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको रणनीतिहरू द्रुत गतिमा देख्न अनुमति दिन्छ।
आजको गाईडमा, हामीले यस बिषयको साथ निम्न बुँदाहरूको आधारमा गहिरो जान निर्णय गर्यौं:
कहिले र कसले प्रतिस्पर्धी विश्लेषण गर्नुपर्छ?
प्रतिस्पर्धी विश्लेषण को फाइदा के हो?
म कसरी प्रतिस्पर्धी विश्लेषण सफलतापूर्वक प्रदर्शन गर्न सक्छु?
२०२१ मा लगानी गर्नको लागि उत्तम SEO उपकरण?
सबैभन्दा लोकप्रिय SEO उपकरणहरूको तुलना SEO ड्यासबोर्डको साथ।
को र कहिले प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण गर्नु पर्छ?
प्रतिस्पर्धी विश्लेषण वास्तवमै सबै समयमा हुनुपर्दछ। तपाई केवल बजारमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, पहिले देखि यसमा सञ्चालन; स्थानीय वा विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन; वा नयाँ बिक्री क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विचार गर्दै; एक प्रतियोगीहरूको व्यवहार पहिचान र अवलोकन एक धार प्राप्त गर्न र एक मजबूत, सफल व्यवसाय सिर्जना गर्न आधारभूत चरण हो।
के प्रतिस्पर्धी विश्लेषण गलत छ?
पक्कै पनि होइन! यो कुनै पनि कम्पनीको लागि राम्रो अभ्यास हो।
यसको जासुसी वा ईभ्सड्रपिंगसँग केही गर्नुपर्दैन। प्रतिस्पर्धी विश्लेषण १००% कानूनी छ र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध डाटामा आधारित छ।
तपाईंको प्रतिस्पर्धीको विभिन्न व्यापार र मार्केटिंग क्षेत्रहरूको गहन ज्ञान भएको तपाईंको कम्पनीको लागि धेरै फाइदाहरू छन्:
एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय को ग्राहकहरु विश्वस्त।
प्रतिस्पर्धाको अर्को चालहरूको भविष्यवाणी गर्दै।
आसन्न खतराहरू याद गर्दै।
खाली ठाउँ चिन्न।
तपाइँको कम्पनी को प्रदर्शन मूल्यांकन।
बजार को आलाहरु पहिचान गर्नुहोस्।
एक प्रतिस्पर्धी विश्लेषण को उद्देश्य ज्ञान र जागरूकता हासिल गर्नु हो। तुलनामा आधारित, तपाईं आफ्नो कार्यहरू तदनुसार समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
हामीले पहिले नै उनीहरूको बारेमा अघिल्लो शीर्षकमा कुरा गरिसकेका छौं। यद्यपि विश्लेषणको महत्त्व बुझ्नको लागि हामीले यस शीर्षकमा यसबारे थोरै कुरा गर्ने निर्णय गर्यौं।
वास्तवमा, प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा विस्तृत जानकारीले तपाईंलाई तिनीहरूको कार्यहरूको भविष्यवाणी गर्न, तिनीहरूको उद्देश्य, कार्यनीति, शक्ति र कमजोरीहरूको बारेमा बढी सिक्न अनुमति दिन्छ। यो ज्ञानले तपाईंलाई तिनीहरूको कमजोरीहरूलाई फाइदाहरूमा बदल्न अनुमति दिन्छ र बजार प्रवेश रणनीतिहरू, सञ्चार रणनीतिहरू, बिक्री वा वितरण योजनाहरू सिर्जना गर्दा विश्लेषणका निष्कर्ष सूचनाहरूको स्रोतको रूपमा सेवा गर्दछ।
थप रूपमा, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा फाइदा लिनको लागि एक अनिवार्य उपकरण हुनेछ। याद राख्नुहोस् कि धेरै जसो केसहरूमा तपाईका प्रतिस्पर्धीहरू तपाईको भन्दा बजारमा लामो हुन्छन् र तपाईका ग्राहकहरूलाई जित्नु सजिलो काम हुनेछैन।
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको रणनीतिलाई थाँहा पाउँदै, तपाइँ धेरै समय ब्यबहार गर्न सक्नुहुन्छ जब अन्य कम्पनीहरूले उनीहरूको पछाडि सास फेर्न थाल्छन्। यो हुनको लागि, तपाइँ तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई राम्ररी जान्नु आवश्यक छ, योजना छ, र एक विशेष लक्ष्यको खोजीमा व्यवस्थित हुनुपर्छ। अन्तत:, एक प्रतिस्पर्धी रणनीति पूर्ण रूपले कार्यरत व्यापारको लागि तपाईलाई एक ठूलो प्रेरणा र तपाइँको उद्योगमा सबै भन्दा राम्रो ठाउँमा कसरी व्यवहार गर्ने सूचक हो।
कसरी सफल गहन प्रतिस्पर्धी विश्लेषण गर्ने?
यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि गहन विश्लेषणको सफलता एसईओ उपकरणमा आधारित छ। वास्तवमा, एसईओ उपकरणहरूले तपाइँलाई तपाइँको प्रतिस्पर्धी साइटहरूबाट आउने गोप्य जानकारी हुन र राम्रो रणनीति प्रस्ताव गर्न अनुमति दिन्छ। यसका अतिरिक्त, तिनीहरूले तपाईंलाई तपाईंको साइटको स्थिति जान्न र के गर्न आवश्यक छ र के सुधार गर्न आवश्यक छ भनेर जान्न अनुमति दिन्छ।
त्यसो भए, एसईओ उपकरण छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ तपाईंको SEO प्रोजेक्टहरूमा सफल हुनुहोस्।
कि लागि, चिन्ता नगर्नुहोस्!
निम्नलिखितमा, तपाईले बजारमा हाल उत्तम उपकरण भेट्टाउनुहुनेछ जुन तपाईको एसईओ सेवामा सफल हुन आवश्यक पर्ने सबै प्रकार्यहरू एकसाथ ल्याउँदछ।
त्यहाँ बजारमा अधिक SEO उपकरणहरू छन् जुन बिभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। जे होस्, यी उपकरणहरूको अधिकांश, ती रूपमा लोकप्रिय, तपाईं आफ्नो काम प्रदर्शन गर्न आवश्यक सबै सुविधाहरू छैन। त्यसोभए, तपाईंलाई एक उपकरण चाहिन्छ जसमा सबै सुविधाहरू एकैचोटि बहु सदस्यता चार्जबाट बच्नको लागि हो।
कुनै पनि एसईओ प्रदायकको यो आशालाई पूरा गर्न, Semalt ले एक क्रान्तिकारी SEO उपकरण विकास गरेको छ जसलाई SEO समर्पित ड्यासबोर्ड। यस उपकरणले सबै सुविधाहरू एकसाथ ल्याउँदछ जुन तपाईंले सजीलै आफ्नो मिशन पूरा गर्न आवश्यक छ। यो उपकरणले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ:
सन्दर्भ स्थिति (साइट दृश्यता र लिंक प्रोफाइल) को सर्तमा साइटको स्थिति र डोमेनको राज्यको प्रभावहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्न।
अतिरिक्त कार्यहरू जुन वाक्यांश खोजी वा प्रतिस्पर्धा विश्लेषण जस्ता स्थितिको क्षेत्रमा कामको सुविधा पुर्‍याउँछ।
गुगल खोजी ईन्जिन, वेबसाइट ट्राफिकमा वेबसाइटको दृश्यतामा जानकारी प्राप्त गर्न।
लिंक प्रोफाइलमा जानकारी (लि and्कहरूको संख्या र साइटको लागि अग्रणी लि quality्कको गुणवत्ता, आउटगोइ links लिंकहरूको संख्या र गुण, एंकरहरू)।
सामग्रीको गुणवत्ता र विशिष्टताका बारे जानकारी।
कुञ्जी शब्दहरूको लोकप्रियता र तिनीहरूको वेबसाइटको स्थितिमा लाभदायकता।
रूपान्तरण को सर्तमा तपाईको कुञ्जी शब्दहरुको सम्भावना।
थप रूपमा, यस उपकरणले तपाइँलाई तपाइँको आफ्नै वेबसाइटको स्थितिमा परेका प्रभावहरूको विश्लेषण मात्र गर्न दिदैन तर तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको कार्यहरू जाँच गर्न पनि अनुमति दिन्छ।
को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड खातामा अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण तत्वहरू र सूचकहरू लिन्छ जुन स्थिति स्थिति कार्यको लागि आवश्यक छ। तल तपाईंले प्रत्येक वर्गको लागि विस्तृत स्पष्टीकरणहरू पाउनुहुनेछ:
एक धेरै कुशल लेखा परीक्षा प्रदर्शन गर्न को लागी संभावना
अडिट वेबसाइट को स्थिति प्रक्रिया को क्रम मा र गतिविधिहरु को सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रदर्शन गरिएको प्रमुख तत्व मध्ये एक हो। अडिट प्रदर्शन गर्ने क्षमता भनेको एक दिइएको उपकरणले वेबसाइट ठेगाना प्रविष्ट गरेपछि वेबसाइटको हालको स्थिति विशिष्ट सूचकहरूको सर्तमा निर्धारण गर्दछ। यी हुन्:
उपकरणमा लिंक प्रोफाइल स्थिति;
सामग्री अनुकूलन र लिंक प्रोफाइल;
साइट अनुक्रमणिका, साइटको टेक्निकल स्थिति, आन्तरिक लिinking्क;
साइट र सामग्रीको प्राविधिक अप्टिमाइजेसन;
वेबसाइटको प्राविधिक पक्षहरू (रिडिरेक्टहरू, 4०4 त्रुटिहरू, आदि)।
समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डको साथ तपाईसँग यी सबै जानकारीहरू विस्तृत तरीकाले कुनै समय बिना नै हुनेछ।
समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड एक एसईओ उपकरण हो, जसले सम्भावित ट्राफिक विश्लेषणको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्छ। यो चयन गरिएको वाक्यांशहरूको लागि गुगलमा वेबसाइटको दृश्यतामा आधारित वेबसाइटमा सम्भावित ट्राफिकको मूल्याates्कन गर्दछ।
दृश्य अनुगमन भनेको toPoint, top10 र top50 स्थानहरूमा मुख्य वाक्यांशहरूको स्थिति ट्र्याक गर्न क्षमता हो। यो विकल्प समर्पित SEO ड्यासबोर्ड द्वारा प्रदान गरिएको हो। उपकरणमा, तपाईंले थप मोबाइल र डेस्कटप परिणामहरूमा भाँचिएको दृश्यता, साथ साथै मोबाइल उपकरणहरूमा स्थानीय वाक्यांशहरूको दृश्यता पाउनुहुनेछ।
विशिष्ट वाक्यांशहरूको लागि स्थिति अनुगमन
DSD ले तपाइँलाई तपाइँको अभियानमा आफैं थपेको विशिष्ट वाक्यांशहरूको दृश्यता पनि अनुगमन गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँ लगातार एक वाक्यांशको स्थिति निरन्तर अनुगमनको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाइँ DSD मा यो कार्यक्षमता पाउन सक्नुहुन्छ।
कुञ्जीशब्द डाटाबेसले दिएको उपकरणको डाटाबेसमा कुञ्जी शब्दहरूको संख्या समावेश गर्दछ जुन चयनित संकेतकहरूको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ (उदाहरण दृश्यता, यातायात, सामग्री, आदि)।
परिणाम फिल्टर गर्न क्षमता
फिल्टरिंग एक विकल्प हो जुन फरक सूचकहरूको आधारमा परिणामहरूको विभाजन प्रदान गर्दछ। DSD मा, तपाईले पत्ता लगाईएको खोजशब्दहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि, अनुमानित ट्राफिक द्वारा, वाक्यांशमा शब्दहरूको संख्या वा क्लिकहरूको अनुमानित संख्या।
डाटा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता
डाटा निर्यात गर्ने क्षमताको अर्थ एसईओ समर्पित ड्यासबोर्डले तपाईंलाई स the्कलन गरिएको डाटालाई विभिन्न ढाँचामा फाईलको रूपमा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ - उदाहरणका लागि, PDF, CSV वा JPG/PNG।
डाटा संग्रह अवधि
SEO समर्पित ड्यासबोर्ड केवल वर्तमान डाटा मात्र ऐतिहासिक डाटा प्रदान गर्दछ। यसको मतलव तपाईले आफ्नो साइटको दृश्यता वा लि period्क प्रोफाइल निर्दिष्ट अवधिमा विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि २०२० देखि अहिले सम्म। सब भन्दा व्यापक जानकारी एसईओ समर्पित ड्यासबोर्ड द्वारा प्रदान गरिएको हो, जुन २०२० र मुनिका डाटा संकलन गर्दछ।
साइटको सामग्रीको विशिष्टता जाँच गर्दै
यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि साइटको सामग्री अनौंठो छ र अर्को साईटबाट चोरी गरिएको छैन। वास्तवमा, हामी सबैलाई थाहा छ कि गुगलले यस अभ्यासलाई घृणा गर्दछ र यसलाई दण्ड दिन हिचकिचाउँदैन। त्यसो भए एसईओ ड्यासबोर्डको साथ, तपाईंले सामग्रीको विशिष्टता जाँच गर्न कुनै पनि अन्य सदस्यता गर्नुपर्दैन।
SEO समर्पित ड्यासबोर्ड एक 14-दिन परीक्षण संस्करण प्रदान गर्दछ। यस अवधिमा तपाईंसँग मानक प्याकेजमा समावेश सबै सुविधाहरूमा पहुँच हुनेछ। यस तरिकासँग तपाईंसँग उपकरणको साथ आफैलाई परिचित गर्न समय छ र यसको वित्तीय प्रदर्शन प्रतिबद्ध गर्नु अघि यसको प्रदर्शन र दक्षता जान्नुहोस्।
सब भन्दा लोकप्रिय SEO उपकरणहरूको तुलना SEO समर्पित ड्यासबोर्डको साथ
आज एसईओ समर्पित ड्यासबोर्डमा सुविधाहरू छन् जुन यसलाई उत्तम एसईओ उपकरण बनाइएको छ जुन विज्ञहरूले अँगालोमा ल्याएका छन्। साधारण कारण यो हो कि जब तपाईं बजारको सबैभन्दा लोकप्रिय उपकरणहरूसँग तुलना गर्नुभयो जब आज उबेरसबगेस्ट; Ahrefs; र सेमरुश तपाईंले बुझ्नुभयो जुन SEO समर्पित ड्यासबोर्ड सबै कार्यक्षमता मा धेरै अधिक उन्नत छ। थप रूपमा, यससँग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त सुविधाहरू छन् जुन अन्य have सँग छैन।
त्यसैले म तपाईंलाई Semalt समर्पित SEO ड्यासबोर्ड र Ahrefs, Ubersuggest र Semrush जस्तै विश्लेषण उपकरण बीच भिन्नता पत्ता लगाउन आमन्त्रित गर्दछु।